အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: သူ့အလှည့်ကျ အီးကျယ်ကျယ်မပေါက်ရဲဘူးဆိုတော့
(Crediit - ငရဲ သား )
လွှတ်တော်ထဲက ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အူသံတွေဟာ ..
အွန်လိုင်းကနေ ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေပေါ် တက်လာချိန်မှာ ....
ပါတီဥက္ကဌ ရာထူးကော ..
လွှတ်တော်ဥက္ကဌနေရာ ပါ ယူထားတဲ့ ဘဘမန်းခမျာ..မှာ ...
(၁) ဘင်္ဂလီအမတ်တွေကို ချကျွေးမလား ....။
(၂) ၉၆၉ ကို ဆော်မလား ...။
ဘင်္ဂလီ အမတ်တွေကို လူသိရှင်ကြား ဖြုတ်ရင် ပါတီနာတယ်..။
အဲဒီ အမတ်တွေကို မဲပေးဖို့ white card ပေးထားတဲ့
၂၀၁၀ တုန်းက (၅) သိန်းကျော်ကိစ္စကို ပါ
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်...။
လက်ရှိ ရခိုင်ဒေသက နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ၂၀၁၅ ကျရင် မဲပေးဖို့ ပြန်သုံးရင်လည်းသုံးနိုင်တယ်...။
ရန်ကုန်ထဲက ကုလားပရိသတ်ရဲ့ မဲပေးမှုဟာလည်း ရန်ကုန်က လုပ်ငန်းရှင် ဘူးသီးတောင် မောင်တော ဘင်္ဂလီအမတ်တွေအပေါ် မူတည်နေတာ ငြင်းမရဘူး ..။
၂၀၁၅ မှာ ကုလားကိစ္စကြောင့် ကွဲကိန်းမြင်တဲ့အတွက်
တစ်ဖက်က NLD နဲ့ ညွန့်ပေါင်းလည်း လုပ်ချင်နေတယ်...။
PR ကိုလည်း ကြိုးစားနေတယ်...။
ဒီတော့ ... ၉၆၉ ကို ပါးပါးလေး .. ပုတ်လိမ့်မယ်..။
ထူထူ ပုတ်လို့ မရဘူး .။.
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် အစိုးရကိုယ်တိုင် ကိုရဲမင်းဦးကို ချကျွေးဖို့ ဖမ်းထားပေမယ့်
နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကို အခြေခံဥပဒေပါပုဒ်မတွေ ဘာသာချင်းစော်ကားရင် အဓိကရုဏ်းကို သွေးထိုးရင် အရေးယူလို့ရတဲ့ ပုဒ်မတွေ များစွာရှိတာတောင် .
သူလည်း လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး ..။
ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ပါးပါးလေးပုတ်တဲ့ အတွက်
online မှာ ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ NLD ကို ပွဲဆူအောင် ဖွနေတဲ့ အကောင့်တွေ page တွေက အသံတိတ်သွားတယ်..။
လေးစားတဲ့ စိတ်က ရှိပြီးသားလေ...။
ဒေါ်စုတုန်းက ဘာညာ အော်နေတဲ့သူတွေ သူ့အလှည့်ကျ
အဲဒီတော့ မင်းသား.. ဇာတ်ဆရာ ဒါရိုက်တာကြီး . .
ဘယ်လိုတွေ ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ
မင်းသားလုပ်မလဲ ... စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ....။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:33 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook